Ukwandiswa kweApple Pay kuMbindi Merika kuya kuqala eCosta Rica | IPhone iindaba
Ukongezwa kwe-Apple Pay kuMbindi Merika kuya kuqala eCosta Rica
Ukusukela oko yaziswa kunye nokwaziswa okulandelayo kwimarike kwi-2014, iApple Pay iye yanda ngokuthe chu ukuya kumazwe amaninzi, nangona kunjalo, ILatin America yenye yeengingqi ekubonakala ukuba u-Apple uzilibele. Ubuncinci kude kube ngoku, ukusukela ngokutsho kwabafana abasuka kwi-9to5Mac, iApple ilungiselela ukwandiswa kweApple Pay kuMbindi Merika ukusuka eCosta Rica.
Ngokwesi sixhobo, iApple Pay ilungiselela ukumiliselwa kwayo eCosta Rica ngebhanki BICredomatic. Ukuba ezi ndaba ziqinisekisiwe, iCosta Rica iya kuba lilizwe lesibini eMelika elithetha iSpanish ukufumana lo msebenzi emva kweMexico. EBrazil, iApple Pay ibisebenza ukusukela oko iMidlalo yeOlimpiki yokugqibela yabanjwa ngo-2016.
Ngale ndlela, iCosta Rica iya kuba Ilizwe lokuqala kuMbindi waseMelika lokufumana iNkxaso yokuHlawula iApple, uphawu esele lufumaneka kumazwe angaphezu kwama-60. Ngokucacileyo, i-BAC Credomatic yaqala ukuvavanya inkxaso kwi-Apple Pay eCosta Rica kwiiveki ezimbalwa, inkxaso eya kuthi ifumaneke kubasebenzisi beVISA kunye ne-Mastercard ekuqaleni.
Ukubona ukuba izicwangciso zebhanki zikufuphi na ekwamkelweni kweApple Pay, kufuneka ibhanki bonisa ukuba iyahambelana neApple WalletOku kungqinelana kungokunje akunikezelwa sisicelo esisemthethweni seBAC Credomatic, kodwa leyo iyafumaneka kuVavanyo lwendiza.
Ukuba sithathela ingqalelo ukuba i-BAC Credomatic ayifumaneki kuphela eCosta Rica, kodwa ikwanobukho kwamanye amazwe anje El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Bahamas kunye Grand CaymanNjengoko ukumiliselwa kwenzeka eCosta Rica, iya kuba ngumcimbi weentsuku ngaphambi kokuba iApple Pay ifike kwamanye amazwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Ukongezwa kwe-Apple Pay kuMbindi Merika kuya kuqala eCosta Rica
Umnini mhlaba we-simulator yeshishini ngoku ikuvumela ukuba uthenge ipropathi ezixekweni
Ukufumana ii-AirPods ezilahlekileyo kuya kuba lula nge-iOS 15 kunye nenethiwekhi ethi "Fumana My"